Inona no dikan'ny hoe maso feno rano amin'ny alika? | Tontolo alika
Ny dikan'ny maso feno rano dia manana ranomaso be loatra avy amin'ny masontsika isika. Izany dia zavatra nitranga taorian'izay ny lacrimal dia manana fanentanana be loatra Ary izany dia mitranga noho ny antony samy hafa, noho izany, eo imasontsika dia misy triatra na hamandoana be dia be ao amin'ny faritra ambonin'ny maso, zavatra iray izay mitranga ao amin'ny alikanay koa.
Ny fiasan'ny ranomaso dia ny famongorana ireo vatana vahiny niditra tao amin'ny maso ary hitazona azy ireo hamandoana ampy. Toy izany koa, ny fananana maso feno rano dia midika izany izy io dia mety ho ampahany amin'ny iray amin'ireo soritr'aretin'ny aretina hafa.
1 Inona no antony mahatonga ny maso feno rano amin'ny alika?
1.1 Ny mason'ny alikako dia manondraka ary voan'ny crush izy, inona no mahazo azy?
1.2 Fa maninona ny masoko no mena sy malahelo?
2 Rahoviana no mandeha any amin'ny veterinera?
3 Fitsaboana voajanahary ho an'ny maso feno rano amin'ny alika
3.1 Mba hitsaboana ny rhinitis mahazaka alika
3.2 Ho an'ny conjunctivitis amin'ny alika
3.3 Ho an'ny lalan-dranomaso voasakana amin'ny alika
3.4 Ho an'ny havizanan'ny havizanan'ny alika
Inona no antony mahatonga ny maso feno rano amin'ny alika?
Amin'ny ankapobeny, saika amin'ny tranga rehetra, ny maso izay mitomany tsy tapaka dia afaka maneho famantarana iray olana ara-pahasalamana hafa ohatra:
Maso reraka: Ohatra, rehefa manao fety ny tanàna na ny tanàna ary mitombo ny tabataba eny an-dalambe dia mety hanana olana amin'ny torimaso ny ora ilainy ilay biby, zavatra iray izay mankasitraka ny fisarahan'ny masony.
Rehefa voasakana ny fantson-dranomaso: na inona na inona. Raha voasakana ny fantson-dranomaso dia hanafina ny ranomaso ny maso.
Niteraka fahasosorana: ny mangidihidy sy / na ny fahasosorana dia mety vokatry ny allergy, na rehefa nifandray tamina zavatra mahasosotra.
Noho ny aretina: Conjunctivitis no be mpampiasa indrindra. Areti-maso ity misy ny soritr'aretina anisan'izany ny triatra.
Ny fisian'ny vatana vahiny eo ambonin'ny mason'ny maso: Somary sarotra ihany, nefa tsy azo atao. Vovoka kely kely na fasika kely dia kely no hahatonga ny mason-drano hanandrana hampijanona io tsy mahazo aina io.
Volomaso izay misy fitomboana anaty: Tsy io no fahita indrindra, fa ny volomaso, ary koa ny volo sisa, indraindray maniry anaty fa tsy mivoaka ivelany, izay mety hiteraka tsy fahazoana aina.
Blepharitis: ny fivontosan'ny moron'ny mason-koditra.
Amin'ny alàlan'ny rivotra izay voaloto na koa avy eo dia feno zavatra simika: mihetsika ny maso amin'ny famokarana tomany bebe kokoa hiarovan-tena.
Fivoahana ny hodi-maso na anatiny na ivelany: Midika izany fa karazana hernia amin'ny mucosa izay kely.
Antony iray hafa voalohany, na dia toa mampihomehy aza, ny zava-misy maina ny maso, izay mahatonga ny vatan'ilay alika hamoaka tomany be loatra.
Ny mason'ny alikako dia manondraka ary voan'ny crush izy, inona no mahazo azy?
Ny mason'alika, toy ny antsika, dia mamokatra kilema. Ilaina tokoa ireo, satria mitazona azy ireo hihosotra. Saingy tsy mitovy daholo:
Legañas mavo na maitso: mampiavaka ny aretina iray izy ireo, ary koa ny ratra amin'ny maso. Raha ny alikanao dia manana legañas amin'ireto loko ireto dia mila manatona mpitsabo arak'izay haingana ianao, satria mety ho famantarana ny aretina lehibe izany.
Legañas fotsy na fotsy: mahazatra izy ireo mandritra ny conjunctivitis, ary vokatr'izany dia ilaina ny mametraka ny alika amin'ny fitsaboana.
Legañas madio sy feno rano: Mety hateraky ny alèjia izy ireo, akora hafahafa sy mahasosotra izay napetraka eo ambonin'ny mason'ny maso, ary na dia zavatra matotra toy ny glaucoma aza. Jereo àry ny alikanao, ary raha tsikaritranao fa maratra be izy, na mandrovitra be loatra dia ento any amin'ny mpitsabo biby izy.
Legañas volontsôkôlà mena: azon'izy ireo io loko io rehefa naseho tamin'ny rivotra efa ela ny biby. Amin'ny fitsipika dia tsy mila manao na inona na inona ianao, fa raha mena ny maso na manomboka miteraka ranomaso be dia tokony horaisinao izany mba hozahana.
Legañas maina: Manana hodi-kazo kely izy ireo, ary akora matevina, ary vovoka no anaovana azy amin'ny ankapobeny. Raha mbola tsy mahazo aina amin'ny alika izy ireo, dia tsy hisy na inona na inona, satria ara-dalàna ny fananana sasany, indrindra rehefa avy mifoha.
Fa maninona ny masoko no mena sy malahelo?
Betsaka ny antony mety mahatonga ny maso mandriaka amin'ny alikao, fa raha mena maso koa izy mety voan'ny aretina ianao. Raha tsy misy soritr'aretina intsony, ary miaina bebe kokoa na latsaka toy ny mahazatra ny biby dia tsy mila miahiahy be loatra ianao. Fa eny, zava-dehibe ny fahitan'ny matihanina azy, satria izy no ho afaka hilaza aminao izay fanafody homena.
AZA manasitrana ny alikanao mihitsyNa dia ho an'ny zavatra 'tsotra' toy ny conjunctivitis aza, satria ny risika tsy omena fanafody na fatra mety dia avo.
Rahoviana no mandeha any amin'ny veterinera?
Amin'ny ankapobeny dia tsy famantarana iray izay maneho zavatra tokony hampanahy. Na izany aza, soso-kevitra ny hitsidika ny dokotera rehefa hitantsika fa mitranga io miaraka amina soritr'aretina sasany toy ireto manaraka ireto:
Amin'izao fotoana izao dia hitantsika izany misy fanaintainana rehefa mikasika ny orona isika ny alika, toy ny sinus ihany.
Rehefa mena ny maso ary hitantsika fa misy a tsiambaratelo tafahoatra.
Amin'izao fotoana izao dia miaraka amin'ny fanaintainana eo amin'ny maso.
Ny fitomaniana izay miseho tsy tapaka tsy misy antony mazava.
Fitsaboana voajanahary ho an'ny maso feno rano amin'ny alika
Araka ny efa noresahintsika, ity dia a famantarana izay ampahany amin'ny aretina isan-karazanyNoho izany, raha samy mitandrina ny soritr'aretina tsirairay isika dia tsy hahazo vokatra. Ny zavatra tena atolotra indrindra dia ny manatona dokotera mpitsabo biby mba hahafahany manome diagnostika feno momba an'io aretina asehon'ny alikantsika io.
Raha vantany vao fantatsika fa azo tsaboina io dia afaka mandray ny safidy hafa isika mampihatra fanafody izay niavian'ny natiora, tsy ho an'ny maso feno rano ihany fa ho an'ny aretina na olana izay lehibe indrindra.
Mba hitsaboana ny rhinitis mahazaka alika
Ny Nettle, toy ny Eyebright, dia manana fahaizana manimba ny sinosy ary koa mba hanafoanana ny soritr'aretina tsirairay izay mitranga amin'ny rhinitis mahazaka, toy ny maso feno rano.
Ho an'ny conjunctivitis amin'ny alika
Raha ny tranga teo aloha, Azontsika atao ny mampiasa Eyebright toy ny Chamomile ihany, satria ireo dia zavamaniry ampiasaina rehefa misy olana amin'ny maso.
Ho an'ny lalan-dranomaso voasakana amin'ny alika
Raha manadio azy amin'ny rano chamomile na volomaso kely isika dia afaka mitsabo an'io olana io. Avy eo dia tsy maintsy manao izany isika fanorana amin'ny faribolana, tsindrio moramora amin'ny rantsan-tànanao, farafahakeliny indroa isaky ny maso.
Ho an'ny havizanan'ny havizanan'ny alika
Raha mampihatra a famatrarana nettle, azontsika atao ny manararaotra feno ireo fananana manohitra ny inflammatoire satria manampy amin'ny fanatsarana ny fihenjanana eo amin'ny mason'ny alika, ary koa ny fivezivezy ao amin'ny rà.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Inona no dikan'ny hoe maso feno rano amin'ny alika?
Malahelo ny alikako